सम्पादकीय : स्वास्थ्यमा लगानी गर – Yug Aahwan Daily
सम्पादकीय : स्वास्थ्यमा लगानी गर
युग संवाददाता । १३ असार २०७७, शनिबार ०८:३६ मा प्रकाशित
स्वस्थ मानवले मात्र सहज रुपमा जीवन विताउन सक्छ । मानिसका लागि स्वास्थ्य पहिलो शर्त हो । यही कारणले पनि हरेक देशका सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा पनि फरक छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा धेरै लेखिएको छ । तर पनि आज देशका धेरै नागरिक सामान्य सिटामोल नपाउने अवस्थामा छन् । दुर्गममा नागरिकले अस्पताल र डाक्टरको अनुहार नै देख्न पाउँदैनन् । स्वास्थ्यमा पहुँच नहुँदा नागरिकहरु धामीको शरणमा जाने र परम्परागत विधिमा विश्वास गर्छन् । कर्णालीको अवस्था अझ दयनीय छ । कर्णालीका अधिकांश स्थानमा स्वास्थ्य चौकी छैनन् । दुर्गम भएका कारण त्यहाँ डाक्टर जान मान्दैनन् । यही कारणले व्यक्तिहरु अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । बिरामीको अस्पतालसम्म पुग्न नपाउँदै ज्यान जान्छ । सडक सुविधा नहुनु र बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको अभावमा गर्भवती र सुत्केरीलाई जोगाउनै समस्या पर्ने गरेको छ । एक हिसावले भन्दा कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ ।
स्वास्थ्यमा अहिले पनि लगानी कमजोर छ । नागरिकले बाँच्न चाहेर पनि बाँच्न नपाउने अवस्था दुर्गममा छ । यसको मुख्य कारण भनेकै राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नगर्नु नै हो । आज पनि विकास भनेको सडक खन्नुलाई मात्र लिने गरिएको छ । स्थानीय तहमा त पछिल्लो समय एउटा लहर नै चलेको छ, त्यो के भने विकास भनेकै सडक हो । बजेट भरी सडक निर्माणमा मात्र लगानी गर्ने परिपाटीले जनप्रतिनिधिलाई मात्र होइन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई समेत गाँजेको छ । आज जनताबाट चुनिएका सांसदहरु पनि सडक निर्माणका लागि मात्र बजेट खोजिरहेका छन् । अर्थात सबैको केन्द्रविन्दुमा सडक खन्नु नै छ । सडक आवश्यक पनि हो । तर मान्छेको ज्यान जोगाउने र बिरामीले औषधि उपचार पाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । गाउँमा स्वास्थ्यचौकी र सामान्य उपचार पाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान कहिले जाने ? कहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र ओझेलमा पर्ने ? यसतर्फ अब गम्भिर बन्नै पर्दछ ।
कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार कमजोर छ । यहाँ झाडापखालाबाट सयौंको ज्यान गएको घटना ताजै छ । दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको सामान्य उपचार पनि सम्भव छैन । सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि प्रदेशभन्दा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कर्णालीबासीको छ । यसले नागरिकलाई स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अवस्था समेत देखिदैन । पछिल्लो समय फैलिएको कोरोना महामारीले पनि केही पाठ सिकाएको छ । कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा भएको कठिनाइले पनि कर्णालीको स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने देखाइएको छ । यो यहाँको राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि सिकाइ र अवसर पनि हो । यही बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र आवश्यक उपकरणहरुमा लगानी गर्नु उपयुक्त समय पनि आएको छ । महामारीसँग जुधिरहेका बेला स्वास्थ्यमा पनि लगानी गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भिर बन्नै पर्दछ । (युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)